यी ४ वर्षीय बालकले घरमा रहेको चाबी निकालेर कार लिएर रोडमा निस्किए – OSNepal
यी ४ वर्षीय बालकले घरमा रहेको चाबी निकालेर कार लिएर रोडमा निस्किए
चार वर्षको निर्दोष बालकले घर भित्रबाट कारको चाबी निकाल्छ । त्यसपछि चाबीले कार स्टार्ट गर्छ र बाहिर निस्कन्छ। जब प्रहरीले उनलाई सोध्यो तिमीले यो सब कसरी गर्यौ ? त्यसैले उसले फेरि कार कसरी स्टार्ट गर्ने भनेर पूर्ण आत्मविश्वासका साथ बताउँछ। यो सुन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ तर यो सम्पूर्ण घटना सत्य हो । आइतबार नेदरल्याण्डमा यो कुरा बाहिर आएको हो ।
यस विषयमा ‘द गार्डियन’ मा रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ । जसमा बच्चा एक्लै र खाली खुट्टा भेटिएपछि उनलाई मेडिकल चेकअपका लागि लगिएको बताइएको छ । यसपछि एम्बुलेन्सका सदस्यहरूलाई बालकका आमाबुवा नजिकै नभएको महसुस भयो । त्यसैले उनीहरुले उनलाई नजिकैको प्रहरी चौकीमा लगे । जहाँ यी बालकलाई हट चकलेट खुवाइएको थियो । केही समयपछि प्रहरीले पनि वरपरको क्षेत्रमा कसैलाई गाडी छोडेको थाहा पाए ।
यो कार पार्किङमा राखिएका कारसँग ठोक्किएको हो । यसपछि प्रहरीले कारको दर्ता मालिकलाई बोलायो, जसमा उनी सोही ४ वर्षीया निर्दोष बालिकाकी आमा भएको थाहा भयो । जो प्रहरी चौकीमा उपस्थित थिए । यस क्रममा निर्दोष बालककी आमाले प्रहरीलाई आफ्नो बच्चाले सधैं केही नयाँ गर्ने प्रयास गर्ने बताइन् । त्यसपछि उनले आफ्नो बच्चासँग फोनमा कुरा गरे। यस क्रममा बालकले हातले स्टेयरिङ नक्कल गर्न खोजेको देखेको प्रहरीले जनाएको छ ।
जसका कारण बालकले नै गाडी चलाएको हुनसक्ने आशंका पनि प्रहरीले गरेको छ । यसपछि प्रहरीले बालककी आमालाई दुर्घटनाग्रस्त कारमा राखेको थियो । बालकका बुवा पनि त्यहाँ पुगे । यसै क्रममा प्रहरीले बच्चालाई सोध्यो, ‘यो कार कसरी चल्छ भन्न सक्छौ ? उनले चलाएर देखाई दिएका थिए । उट्रेच पुलिसले यो पूरै मामला क्रमिक रूपमा शेयर गरेको छ।